War deg deg ah:Xaaji Cumar Cumay oo la soo daayey,saakana ku sugan Buuhoodle.
Laascaanood,Somalia,09 December 2003 �Warar deg deg ah oo uu saaka weriyaheena noo jooga magaalada Laascaanood na soo gaadhsiiyey wuxuu noo sheegay in Caaqil Xaaji Cumar Camay uu xalay fiidkii isaga iyo niman iyaguna u dhashay beeshiisa,balse ah madax itoobiyaan ahi ay soo gaadheen magaalada Buuhoodle.
Xaajiga ayaa laga soo qaaday degmada Wardheer ee Itoobiya,halkaas oo isaga iyo rag kale oo gaadhaye 20-taneeyo lagu hayey hada mudo wiig ah,kadib markii ay rabshado fool xumi oo dhaawac iyo dhimashaba keenay ka dhaceen magaalada Sararaweyne oo 15 mil dhinaca itoobiya ka xigta magaalada Buuhoodle.
Sida uu noo soo sheegay wariyaheenu,dhamaan ragii la qabqabtay waa wada caafimaad qabaan,waxayna ku sugan yihiin magaalada Wardheer,waxaana insh,alaah la rajaynayaa in sida ugu degdegsiiyaha badan ooda looga soo qaadi doono.
Xaaji Cumar Camay ayaa kadib markii maamulka itoobiya iyo odayaashu isku af garteen in la xaliyo arinta,dibna itoobiyaanka loogu soo celiyo alaabadii laga qaatay,ayaa waxay itoobiyaanku ka codsadeen in odayaashu iska soo saaraan hal qof oo la taga Buuhoodle,si arintii dhacday loo xalilo,markaa odayaashii waxay isku raaceen,in Xaajiga la sii daayo,oo uu tago Buuhoodle.
Wixii akhbaar ah ee dheeraad ah ee naga soo gaadha saacada soo socda insha,alaah waa idiin soo gudbin doonaa,xaaladuna hadeer meel fiican bay maraysaa!!.